Muqdisho lagu Doortay Nin dhawr bil ka hor u sharaxna Barlamaanka Somaliland – KHAATUMO NEWS
Muqdisho lagu Doortay Nin dhawr bil ka hor u sharaxna Barlamaanka Somaliland
Sidana waa dhacdaa, doorashadii “Somaliland” ayuu xildhibaan uga sharaxnaa, saakana Muqdishuu xildhibaanka yahay.
Carta intaan laysugu tagin ayaa nin wuxuu u tagay Ciqaal Ilaahay hawnaxariistee, wuxuu ku yidhi Agaasime iga dhig, Cigaal waa ka diiday, maalintii danbe ayaa Carta laysugu tagay, shirkii Carta ayuu ninkii ka qayb galay, Xildhibaan ayuu noqday, wasiirkii Caafimaadka ee xukuumadihii Cali Khaliif, iyo Xasan Abshir IHN iyagana waa ka qayb galay.
Cigaalow ayuu odhan agaasime ayaad iidiidee Xildhibaan iyo Wasiir ma kugu noqday la aqoonsan yahay.
2003 ayaan Burco maalin anoo Wargeyska Jamhuuriya ku akhrisanaya waxaan ku arkay ninkii oo lagu waraysanayo oo la cafiyey oo leh Cigaal Agaasimuu iidiidey anna Waan cadhooday oo waanigaa dusha kaga imi.
Dhacdooyinkani waa tiro badan yihiin, waxaase laga yaabaa afarsano ka dib in la arko sidii ninkaa xilligaa iyo Qodax isaga oo leh halay cafiyo.
Previous Post: Ina Kaahin Oo Xayiraad Saaray Buuni oo u caayi jiray Dadka
Next Post: Daawo:-Ciidankii Ka Soo Goostay SNM Oo lacag badan lagu Wareejiyay Maanta
nimankaan shartooda waa in casumada somalia laga mamnuuca waxaan iskudir aheeyn mayaqaanin qabiil ayaa diintoodu tahay inta somali ku dhex jiraan walee dowlad somali fiicaan inaan laheleen itoopianka bay kaa jecel